ဘေဘီလုံရှိ မိုးပျံဥယျာဉ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘေဘီလုံရှိ မိုးပျံဥယျာဉ်ကို သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲထားသောပုံ
ဥယျာဉ်ကို ဘေဘီလုံဘုရင် နီဘူချတ်ဒ်နက်ဇာ ၂ က ဘီစီ ၆၀၀ ခန့်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်. သူသည် အိမ်ကို လွမ်းဆွတ်တသနေသည့် သူ၏ ဇနီး မီဒီယာ ဒေသသူ အမီတစ် ကို နှစ်သိမ့်ရန် အတွက် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သူမသည် သူမဒေသရှိ သစ်ပင်များနှင့် ရနံ့မွေးသော ပန်းပင်များကို လွမ်းဆွတ်နေသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်သည် ဘီစီ ၂ရာစု နောက်ပိုင်း မြေငလျင် အချို့ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
↑ Foster၊ Karen Polinger (1998)။ "Gardens of Eden: Flora and Fauna in the Ancient Near East" (PDF)။ Transformations of Middle Eastern Natural Environments: Legacies and Lessons။ New Haven: Yale University။ pp. 320–329။ 28 August 2006 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-08-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘေဘီလုံရှိ_မိုးပျံဥယျာဉ်&oldid=624109" မှ ရယူရန်